'फालेलुङ र काबेली बजार': सहरी अन्धकारमा गाउँको बत्ती - Everest Talk
‘फालेलुङ र काबेली बजार’: सहरी अन्धकारमा गाउँको बत्ती1 min read
गाउँमा बस्नु र सरहलाई नराम्रो देख्नुमा खास तुक हुँदैन । त्यो फगत एक पूर्वाग्रह हो ।
२०७६, २२ पुष मंगलवार १९:२१
म बसेको सहर पनि टेन्डरमा छ रे
जीउमा सहर छाम्छु — पाउँदिनँ
जीउमा देश चिमोट्छु — दुख्दिनँ ।
जिन बौद्रिलार्डले यी हरफ पढेका भए केके सोच्थे होला ? सिद्धान्तमा उनले जति कसैले चिनेन सहरको चरित्रलाई । तर एउटा “आम आदमी” ले बाँचेको सहरमा उनका पनि आँखा छलेर धेरै कुरा बाँचेको हुन्छ । नेपालको कुनै प्रतिनिधि सहरमा देखेजति कुराको भेउ पाएमात्र पनि बौद्रिलार्डले यतिचाहिँ भन्लान्ः
सडकहरू पक्पकी उक्किएका छन्
धूलोहरू फुङ्फुङ्ती उडेका छन्
महासङ्ग्रामको याद आइरहेछ
एक युरोपेली भएका कारण बौद्रिलार्डले त्यो भाषामात्रै बुझ्लान्, जुन युरोपकै “वाह्य” शैलीमा कुनै नेपाली सहरले बोल्ला । वेश्यावृत्तिका, रात्रिजीवनका, मानवीय मूल्यको अमानवीय व्यापारका, भ्रष्टाचारका, मदिरा र चुरोटका भाषा बुझ्लान् । तर नेपाली सहरको भाषा अलि फरक हुन्छ । त्यसलाई बुझ्न एउटा फरक चेतना चाहिन्छ । धुवाँजस्तो तिलस्मी छ नेपाली सरहको चालः देखिन्छ, समातिँदैन । चिमिलबाट निस्रित धुवाँजस्तो लट्ठ पनि पार्छ; भित्रभित्रै फोस्का खाएर मरणासन्न पनि पार्छ । पत्यार नलागे धरानका कवि सन्तोष थेबेलाई सोध्दा पनि हुन्छ ।
गाउँमा बस्नु र सरहलाई नराम्रो देख्नुमा खास तुक हुँदैन । त्यो फगत एक पूर्वाग्रह हो । तर सहरमै बस्नु, उसलाई अँगालो मार्नु, माया गर्नु, उसैसँग मात्नु, उसका अनेक दुव्र्यसनहरूको सहचर हुनु, उसका फोहोरहरूको साक्षी हुनु, उसैसँग सनैः सनैः मर्दै जानु…यो एक कहालिलाग्दो यथार्थ, सहरको र सहरवासीको । भित्रैबाट सहरको दुखाइ, र भित्री एक सहरवासीको दुखाइको एकाकार — कवि सन्तोष थेबेको काव्यिक अभिव्यक्तिमा एउटा मुटुछेड काव्य बनेर आएको अनुभव मैले गरेको छु, जसले कति सजिलै तप्किँदै गरेको अस्तित्वको कथा भन्छ, र लस्किँदै आएको मृत्युको फोटो खिचेर छातीमै छुण्डाइदिन्छ । मलाई फालेलुङ काबेली बजार हामीले बाँचिरहेको समयको यस्तै एउटा फोटोजस्तो लाग्छ ।
कवितासङ्ग्रह हो फालेलुङ र काबेली बजार । लेखक हुन् फालेलुङकै सोरोफेरोमा जन्मेर धरानमा जमेका सन्तोष धेबे । कलेज पढाउँदै, कवितहरूको जमातमा हेलिँदै, रङ्गमञ्चमा समयको तस्बिर अभिनयमा उतार्दै उनले कविताकर्म गरेको करिब २ दशक नाघेको पोल कवि बम देवानले पुस्तकमै खोलेका छन् । यी बीस वर्षहरूमा, फोलेलुङले धरान पठाएको एउटा सङ्लो, स्निग्ध छातीमा धरानले धुवाँ लेखेको देखिन्छ । काबेलीको पानीजस्तै सुन्दर र प्रकृतिवादी कविताको अनुहारमा सहरको दाग ज्याद्रो छ, धुवाँको कहर छ, भ्रष्टहरूको कलङ्कको दाग छ, खस्कँदो मानवीयताको कर्कश आवाज छ, हामी सबैको अनुहर छ । तर उनी न रुमानी रहे, न स्वच्छन्दतावादी, न नै प्रकृतिवादी । उनी अर्कै भए ।
छुटेको कथा हो फालेलुङ ! सपना हो काबेली । यथार्थचाहिँ धरान, र धरानले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सहर, कुनै पनि सहर । हामी सबै सन्तोष हौँ — भित्र ग्रामीण आहट बोकेका, बाहिर सहरको आडम्बरले किचिएका । सन्तोषको दुखाइ हामी धेरै धेरैको दैनिकी हो ।
कवि बम देवानले जानकारी दिएका छन्, “फालेलुङ सुदूर पूर्व मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लाको अभिन्न पूर्वी अङ्ग हो । भारत सिक्किमको सीमामा पर्ने महत्त्वपूर्ण नाका हो । फालेलुङ र काबेली नदीको प्राकृतिक बनावट नै यस्तो मनमोहक छ कि जहाँबाट सदा हिमाच्छादित कुम्भकर्ण हिमालको काख र कञ्चनजङ्घा हिमालको स्मित मुस्कान तरङ्गित भइरहन्छ । यहाँको सुन्दरतम प्रकृतिक छटामाथि उभिएर हेर्दा मात्र पनि एउटा कविता रचूँ रचूँ लाग्छ । त्यही कवितामा धुन हालेर हृदयको धुकधुकीसँग गाऊँ गाऊँ लाग्छ ।”
सन्तोषले पनि यो नगरेका होइनन् । तर, सहरको कहरको सङ्क्रमण यति ज्याद्रो छ कि नदी र पहाडका कविताभित्र सहरको द्वैत चरित्रको छाप प्रेत बनेर आइदिन्छ । कवि बम देवानलाई यो हेक्का अवश्यै छ । नत्र, सन्तोष बौद्रिलार्ड र टी.एस. इलियटको लाइनमा भन्दा वर्डसवर्थ अथवा रुसोको लाइनमा रमाउँथे होला । बम देवान पनि । तर सिनाम छेउछाउका यी दुई कवि — एक अग्रज पुस्ताका, र एक अलि कनिष्ट पुस्ताका — बरु माक्र्सको नजिक देखिन्छन् । उनी दुवैमाथि स्वच्छन्दवादी वा प्रकृतिवादी भनेर भनियो भने निधारबाट चिप्लिएर झर्छ त्यो समालोचना, र सीधै काबेलीमा खसेर बग्छ, कता हो कता ! भो, यस्तो जोखिम कसैले नमोलोस् !
तर सन्तोषले आफ्नो प्रिय फालेलुङको प्रेम भुलेका छैनन् । लेख्छन्ः “फालेलुङले पूर्वमा अलिकति तातो नेपाल कोरेका छ ।”
२१ उम्दा कविता छन् सङ्ग्रहमा । कवि बम देवानमा भूमिका लेखेका छेन्, “कविताहरू अमूर्त नभएर बोधगम्य, ठोस र समसामयिक लाग्यो ।” (५)
बोधगम्य पनि हुन्, ठोस र समसामयिक पनि हुन् । तर मूर्त? सबैचाहिँ होइनन् । सहर र समयको नाङ्गोपनमाथिको हमला हो यो सङ्ग्रह, र अलिकति अमूर्त, अलिकति बक्र हुनु कवितको बाध्यता हो । केही कविता त अलिकति अमूर्त नै हुन् । माफ पाऊँ, अग्रज दाजु बम देवान । अनि, तपाईंले भूमिकामा उल्लेख गर्नुभएको “गुनासोको गडतीर र नागबेली तमोर” भन्ने कविता चैँ सहरबासी सन्तोषले सुुटुक्क निकालेछन् । सङ्ग्रहमा भेटिएन ।
सन्तोषका प्रायः कविता समयको अँध्यारो पक्षमाथि लेखिएका छन्, तर तिनको गर्तमा उज्यालोको वकालत छ । उनी सहरका आडम्बर र समयका घाउ पखाल्न चाहन्छन् । यसो गर्नका लागि, पहिले ती आडम्बर र घाउ कहाँ कहाँ छन्, त्यस्तको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नु उनको कविको दायित्व हुँदै हो ।
“साग बेच्ने केटी” सङ्ग्रहको पहिलो कविता हो । यसमा साँगुरीबाट साग बेच्न र सौदा खेप्न सहर पसेकी एउटी केटीको चित्रण छ । गाउँ छँदा सहरबारे सुन्दर कल्पना थिए उनका । सहर पुगेपछि उनको अनुभव यस्तो थियोः
टलक्क टल्कने जस्तोको छानामुनि
सुन्दर सहरको सून्दर कोठाभित्र
चोलीको तुना चुँडिदियो
निधारको टिका पुछिदियो
सहरलाई हेर्ने सुन्दर आँखाभित्र फुलो पारिदियो (२१)
त्यसपछि गाउँकी उक्त केटीको कथा नै फेरियो । ऊ फेरि कहिल्यै साँगुरी पुगिन ।
यस्तै बमु्रडाको त्रिकोण हो सहर । यसले जसको पनि उज्यालो निलिदिन सक्छ । जसलाई पनि चुसेर नालीमा फालिदिन सक्छ । यस्तै छ सन्तोषको अनुभव । र हाम्रो पनि । त्यो केटी त एउटा रुपक अलङ्कार हो, जसले ग्रामीण मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ, जसलाई सहरले रिइफाई अर्थात् वस्तुकरण गर्छ, र बलात उपभोग गर्छ ।
स्वरूपमा रुमानीजस्तो लाग्ने अर्को कविता छ “फालेलुङ र काबेली बजार” जसको अन्तर्यमा प्रकृति र स्थान विशेषको चित्रणभन्दा पनि मानवीय पीडाको सुसाइ बढी प्रतिध्वनित भएको पाइन्छ । परोक्षा पारामा यस कविताले यहाँको ग्रामीण जीवनसँग गाँसिएको श्रम र पसिना, अशिक्षा र गरिबी, प्रशासनले गरेको वेवास्ता, र यसको जीवनशैलीमा विद्यमान दुःखमोचनको आफ्नै गाउँले शैली पस्केको छ । गाउँसँग टाँसिएर बस्ने पीडाको आदिम सुसाइ, पुनरावृत्त गरिएका हरफहरूमार्फत् गीतको शैलीमा आएको छ । सस्वर वाचन गरेर पढ्दा गाउँकै सुस्केरा र दुखाइको गीतजस्तो लाग्ने यो कविता आफैँमा एउटा नवीन शैलीको अविष्कार पनि हो । यो कविताको संरचना र कथ्य दुवै सन्तोष थेबेको काव्यिक निजत्वको ग्यारेन्टी हो ।
माथि सन्तेषका कविता केही हदसम्म अमूर्त छन् भन्ने दावी गरिएको छ । त्यसको एउटा मिसाल हो “विधिलाई विडम्ना नमान्दा” शीर्षकको कविता, जुन पददलित र किनारीकृतहरूको पक्षमा लेखिएको छ । ग्राम्चीले भनेजस्तो आफूमाथि शासन गरिएकोसम्म थाह नपाउने गरी लठ्याइएका भूमीहर र सर्वहारा यस कविताका विशेष्य हुन् । “एउटा मान्छे” भनिएको एउटा अमूर्त पात्रको चित्रण छ यहाँ । ऊ यस्तो छः
बिचरा! भन्नु पो हुँदैन
नुनतेल सलाइसम्ममा चिप्लिन्छ
यो धूलोपीठो हुने भूमिकामा
अब त अलिकति साँचेर राखेको
ढुकढुकी पनि पूरा बन्धकीमा छ (२७)
“माटोको सौन्दर्य” माटोकै सौन्दर्यको बारेमा होइन । यो माटोसँगको मान्छेको सामीप्यको बारेमा पनि होइन । यो वास्तवमा प्रेमको कविता हो, जसमा माटोले जस्तै आफूलाई नवीकरण गर्दै र उत्पादनशील बनाउँदै प्रेमलाई सार्थक बनाउने अपिल गरिएको छ । यस्तो कवितामा कवि सन्तोष अमूर्तताको निकट पुगेको पाइन्छ । ससाना कुरामा पनि च्वास्स दुख्ने मान्छेको मनलाई माटोजस्तै सहिष्णु र उर्वर बनाउने सङ्कल्पना बोकेको यस कवितामा माटो फगत एक उपमा अलङ्कार हो । कविता मान्छेकै कथा बोलिरहेको छ । “नजर” कविता मान्छेको स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक कमजोरीमाथिको टिप्पणी हो, जसले देखाएको कुराबाट आँखा हटाउने तर लुकाइको कुरामा नजर लगाउने मान्छेको बानीको चित्रण गरेको छ । यस छोटो कविताको अर्थको आयतन लामो हुन सक्छ । यो मान्छेको यौनिक चरित्रमाथिको पनि टिप्पणी हुनसक्छ, अथवा चासोनिन्दा गर्ने बानीमाथिको दृष्टिक्षेप पनि हुनसक्छ ।
सङ्ग्रहमा अरु कविताभन्दा बिल्कुल पृथक एक कविता छः “सरु” । कुनै सिद्धान्तको फेरो समातेको छैन कविताले, जसरी अरु केही कविताले सचेत रूपमै समातेका छन् । यस कवितामा कविको नितान्त व्यक्तिगत भोगाइ, अथवा कसैको भोगाइको कल्पना पोखिएको पाइन्छ । काबेलीको भित्री प्रवाहजस्तो गहिरो यो कवितामा बैँसमा एकअर्काका लागि विकसित प्रेम वा आकर्षणलाई विविध कारणले अभिव्यक्त गर्न नसकेका, र पछि अरु अरुकै भएका दुई गाउँले प्रेमीको छुटिसकेको कथा, र सम्झनामा टाँसिएर बसेको पछुतो कुँदिएको छ । एकअर्काका भएनन् प्रेमीहरू, र लिनुदिनु केही छैन पनि भन्छन् । तर मन न हो, छुटेको कुराको मोह बाँकी छ । त्यसैले कवितामा छुटेको प्रेमी भन्छ, “त्यही नहुनुमा मधुरो चिसो साँघुरी छ÷त्यही नहुनुमा फुस्स फुस्स उड्ने हुस्सुको टुक्रा छ ।” अर्थात् याद बाँकी छ, सम्झनाका अवशेषहरू बाँकी छन् । कवितामा गहिरोसँग एउटा सार्विक मानवीय मनोवैज्ञानिक यथार्थ अभिव्यक्त भएको छ । हामी आफ्ना आघातहरूलाई जति तर्कहरूले बडार्न खोज्छौँ वा भुलाउन खोज्छौँ, त्यति नै बल्झिरहन्छ त्यो सम्झना । आखिर, सामान्य र तुच्छ लाग्ने तितेपाती, कालीझार, ऐँसेलु वा जमिनमा छोडिएका क्षणभङ्गुर पाइलाहरू पनि किन बल्झाइरहन्छन् छोडिएको अतीत । कविताको यो मनोवैज्ञानिक गहिराइ स्तुत्य छ ।
“एउटा मानचित्रमा सर्प र भ्यागुताको मिथक” शीर्षकको कविता पनि अमूर्त छ, र लाग्छ यो एउटा राजनैतिक व्यङ्ग्य हो । सर्प र भ्यागुता, तथा सानो मानचित्र र वास्तविक मानचित्रमा प्रतीकहरूमार्फत् कविले ठूला र साना मान्छे वा देश, अर्थात् पीडक र पीडितको द्विचर कोरेका हुन् । भ्यागुताकै गीतहरूबाट सिर्जित भ्रममा सर्पहरू मदमस्त हुनुले तल्लो वर्गको अवचेतनमा माथ्लो वर्गको रजाइँको कुरालाई सङ्केत गर्दछ । कविको ठहर छ, “वास्तविक मानिचित्रमा” कोरिएका सीमारेखा त्यति कमजोर हुँदैनन् । त्यहाँ चट्टानमाथि छापिएका हुन्छन् सुनौला अक्षर, र त्यहाँ विद्यमान आदिम पाइताला उकालो चढिरहेका हुन्छन् । कविताको पटाक्षेपमा अभिव्यक्त यो सकारात्मकता एउटा स्वाभिमानको पनि अभिव्यक्ति हो, जसले सर्प र भ्यागुताको मथिकको निस्सारता र अवस्यम्भावी अवशानको भविष्यवाणी गरेको छ ।
“बेथा लोगको सहर” मा सहरले गर्ने गरेको मान्छेको वस्तुकरण, शोषण र क्रमिक हत्याको कथा चित्रित गरिएको छ । “मतलबी सपना” एउटा तर्कमा उभिएको छः सँगै हुँदा सपनामा पनि देखिन्थ्यौ, विछोडपछि देखिन्नौ । तर यो तर्क न त वैज्ञानिक दृष्टिले ठीक छ न मनोवैज्ञानिक दृष्टिले । वास्तवमा, सपनामा देखिने भनेकै छुटेको चीज हो, गुमोको साथ हो, र नपाइएको वस्तु हो, जो अवचेतनामा एउटा अतृप्त र अव्यक्त चाहना बनेर बस्छ । समयको प्रवाहसँगै त्यो बिर्सदै जाने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । बुलन्द कविताको हूलमा यो कविता एउटा क्रमभङ्ग हो । यस कवितका अन्तिम दुई हरफमा कविले कविताको ठीक÷बेठीक जे भए पनि प्रतीकात्मकताको व्याख्या आफैँले गरिदिएर कविताको बहुअर्थी संभावनालाई बन्द गरिदिएका छन् । उनी लेख्छन्, “थुइक्क ! सपना पनि मतलबी हुँदो रहेछ ।” यहाँ कवि निर्णयात्मक मात्रै भएनन्, व्याख्याता पनि भए, र निचोड नै थमाइदिए पाठकको हातमा । पाठकको काम बाँकी रहेन । यसो नगरेको भए हुनेथ्यो ।
“अपशकुनको दोबाटोमा” फगत एउटा चुट्किलाजस्तो लाग्छ, र कुनै अवैज्ञानिक अध्यनविश्वासको पृष्ठपोषण गरेजस्तो लाग्छ, जुन सन्तोष थेबेको कविताको मूल भँगालोमा एउटा अपवादमात्रै हैन, एउटा प्रतिधारा पनि हो । यो प्रश्न त समयले फेरि पनि सोध्ला सन्तोष थेबेलाई । अथवा, यो एउटा वक्रोक्ति पनि हुनसक्छ । पाठकले ठम्यालान् ।
“सहरको मृत्यु सम्झेर” को सम्पूर्ण वजन यसका दुई हरफमा ठम्याउन सकिन्छः “तर सहर मर्दैछ÷सहर मृत्यु माग्दै छ” तथा “सहरको निधारमा मास–हिस्टेरिया लेखिएको थियो ।” यी दुईको योगफलबाट बन्ने सहरको कुरूप चित्र यस कविताको सार हो । यस मूल्यहीनताको यस्तो सहरमा चेतावाहक कुनै अल्पसङ्ख्यक कवि वा विचारक “पागल” वा “मृत” भन्दा पृथक केही हुँदैन भन्ने कविको ठम्याइ समयको विरूपतामाथिको एउटा दार्शनिक टिप्पणी पनि हो । “सपनाको पहाडमा ऐठनको पहिरो” मा पनि कुरूप समयले मस्तिष्कमा, यहाँसम्म कि सपनामा पनि वीभत्स असरहरू छोडेको यथार्थ कोरिएको छ । “पूर्वसङ्केत” मृत्युबोधको कविता हो, जसमा अपशकूनहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै दुष्कर समयमाथि व्यङ्ग्यबाँण प्रहार गरिएको छ । जमिन नहुनु, अथवा मान्छे हुनुको हैसियतामा जमिनमाथि हकदाबी नहुनुको पीडा यस कवितामा व्यक्त गरिएको छ ।
“कतिपय भूलहरू फूल भएर” अलि फरक बान्कीको कविता हो, जसमा प्रेम र प्रणयमाथि पनि सधैँ एउटा ग्रहण बनेर ढुकिबस्ने सहर, अभाव र मृत्युले प्रमोत्सवमाथि बर्साइरहने त्रास र शङ्काको कथा कुँदिएको छ । “उत्सव”, शीर्षकले भनेको ठीक विपरीत पीडाको कविता हो, जसमा एउटा पालुवा पशु — गोरु वा राँगा— को दृष्टिविन्दु प्रस्तुत गरिएको छ । दूध, मासु, श्रम वा छालाका लागि निरन्तर शोषण गरिरहने, र उत्सव मनाइरहने मान्छेको दानवीय प्रवृत्तिमाथिको बलियो प्रहार हो यो कविता । “ऐना अगाडि आज” मा लोकलाज, मासाजिक मर्यादा अथवा बाध्यताका कारण बैँसलाई निर्धक्क फुकाउन नसकेकी एक युवतीको अतृप्तिलाई अभिव्यक्त गरिएको छ । ऐनाअगाडि उभिएर आफैँलाई हेर्दा, भित्र कतैतिर दमित यौवनको मादकता उम्लिएर आएजस्तो लाग्छ उसलाई । तर त्यो असम्भव छ, किनकि, वसन्त बनेर फुलेको उनको मनलाई फुक्न नदिने समयको शिशिर उनकाअगाडि अझै विद्यमान छ । रुमानीजस्तो लाग्ने यो कविता वास्तवमा नारी स्वतन्त्रताको आवाजले ओतप्रोत एउटा विद्रोही कविता हो ।
“श्रद्धाञ्जलीमा काँपेका हातहरू” पनि समयले निरीह मान्छेमाथि थोपरेका कहरहरूको दारुण कथा बोकेर उभिएको हृदयस्पर्शी कविता हो, जसमा आत्महत्या गरेर जाने एउटा पात्रको चित्रण छ । कविलाई यकिन थाह छैन यो “समय त्यस्तो भएर हो” अथवा “विवेकलाई चेतनाले ढोकेर हो”, तर मरेर जानेले जीवनलाई वहिष्कार गरेर गएको छ । तर कविको चेतन मस्तिष्कले यस मृत्युलाई सजिलै सदर गर्न सकेको छैन । आत्महत्याको विरोधमा यो कविको एक जीवनवादी दलील हो ।
“सहश्राब्दीमा फाटेको आकाश” मा कविले पर्यावरणीय विषय उठाएका छन् । तल पृथ्वीमा पृथ्वीवासीहरूको अचाक्लीका करण यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको चित्रण कवितामा गरिएको छः
सहश्राब्दीमा आकाश फाटेर अर्धनग्न भएको छ
सहश्राब्दीमा जमिन सुकेर बगर भएको छ
सहश्राब्दीमा धेरै धेरै जीवात्माहरूको जेनोसाइड भएको छ (६१)
कविले ओजोनको बर्कोमा देखिएको प्वाल, विश्वको बढ्दो तापक्रम तथा अनेक जीवजन्तुको लोपलाई यसरी सङ्केत गरेका छन्, र यसको कारण मान्छेको “अचाक्ली” नै हो भन्ने ठहर गरेका छन् । यो सत्य पनि हो ।
सङ्ग्रहको अन्त्यमा “ट्रयांकुलाइजरको समाधिबाट” शीर्षकमा १ र २ गरेर दुई कविता क्रमशः राखिएका छन् । दुवैको भावभूमि एकै हो । विकृत समयमा अर्धपालग बनेको वा बनाइएको एउटा पात्रको आत्मप्रतिती प्रस्तुत गरिएको छ कवितामा । संरचनामा सङ्गति भेटिँदैन, र कुराको सिलसिला ओहोर–दोहोरको शैलीमा बद्लिरहन्छ, जसले एउटा विक्षिप्त मानस्थितिका विसङ्गत तरङ्गको झल्को दिन्छ पाठकलाई । “समय घडीको सियो बनेर दुखिरहेछ” भन्दै पहिलो कविताको उठान गरिएको छ, जुन वास्तवमा कविताको पटाक्षेप पनि हो । कवितको वातावरण धूमिल अथवा विक्षिप्त नै छ, दुवै कविताको आयतनभरि । यस समय, क्षणिक विस्मृतिका लागि लिइएको ट्रयांकुलाइजर वा डाक्टरी सल्लाहको पनि यहाँ कुनै प्रभाव छैन, किनकि समयको प्रहार यी कुनै उपायभन्दा बढी घातक छ । सबै सबै अनुत्पादक र निस्सार लाग्छन् । कामूक वैंस बोकेका युवायुवतीसँग पनि कामशक्ति छैन । निदाउन सक्दैनन् सहरवासीहरू । घाम, जून वा पहाडमा पनि जीवनदायी केही छैन । ऊर्जा केही छैन । कवि लेख्छन्:
दुख्छ मलाई हावाको सानो झोँक्काले पनि
घोच्छ मलाई जूनको सानो उज्यालोले पनि (६४)
फगत एउटा आस बाँकी छः अनाहकमा पोतिएका क्यानभासका रङहरू घोप्टिएर अँध्योरोमा राँको बोकेर कोही त आउला कि?
यसै शीर्षकको दोस्रो कवितामा पनि जारी छ निस्सारताको चित्रण । साथी छैनन् । हल्ला पनि छैन । अवैध स्वास्नी र पूर्व प्रेमिका पनि फगत सम्झनामा दुख्छन्, डर र ग्लानिको एउटा अन्त्यहीन श्रृङ्खला बनेर । रमेशको दोकान बन्द छ । रक्सी पनि छैन, सधैँ झैँ । छ त उधारो लिइएको एक खिली चुरोट । हुन त ऊ कवि र कलाकार हो, र यो कुरा एउटा पान विक्रेता र अरु केहीलाई थाह छ । उसलाई आजजति कमजोर र निरीह भएको कहिल्यै अनुभव छैन । सूर्यास्तका राता रङजस्ता सामान्य र स्वाभाविक भङ्गिमाले पनि आँखामा त्रास छरिरहेका छन् । जतातातै अपशकुनका सङ्केतमात्रै देखिन्छन् र पात्रलाई मृत्युको आभास हुन्छ । उसले आसन्न मृत्यलाई स्वीकारेको छ । भन्छः
मान्छेहरू आजकल चिहानभित्र आरामसँग कुहिन पनि पाउँदैनन्
कमसेकम मेरो निरर्थक मुत्यु सार्थक मृत्युजस्तो होस् । (७२)
तर यत्तिका निस्सारताबीच एउटा आशा बाँकी छ बाँच्नलाईः “केही समयपछि÷चम्किलो घाम उदाउनेछ÷र एउटा नयाँ चेतनाको दियो बल्नेछ ।”
प्रश्न बाँकी छः यस कविताले चित्रित गरेजति निस्सार, अनुत्पादक र नकारात्मक हो कि होइन आजको समय? चित्रण बढी नै निजी हो? र, अर्को प्रश्नः यत्तिको अँध्यारोको बीच, बिना कुनै आधर कसरी आयो चम्किलो घाम उदाउने आस? एउटा नयाँ चेतनाको दियो बल्ने विश्वास? पखिैरहने एउटा बुद्धको याद? कतै योजक टुटेको छ । केही अस्वाभाविक त छ, यी दुवै कवितामा । खैर, कविताको बैठानमा उज्यालो छ ।
प्रत्येक कविताको छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र विश्लेष्णपछि कवि सन्तोष थेबेको वैचारिक राजमार्ग, तथा काव्यिक शक्ति र सीमाको बोध गर्न पाठकलाई सजिलो भएको हुनुपर्छ । कवि थेबेको कविताको आफ्नै संरचना छ । सरल, बोलचालका शब्द छन्, तर कविता बहुअर्थी छन्, सतहमा एउटा र अन्तर्यमा अनेक अर्थग्राही छन्, कतै अमूर्त पनि छन्, र सोझै बुझिँदैनन् । तिनले दुईचार पटक पढ्नुपर्ने र चिन्तन गर्नुपर्न बनाउँछन् पाठकलाई । हरफहरूको, र कतै कतै त खण्डहरूकै पुरावृत्तिले कवितामा अनौठो सङ्गीतको सिर्जना गरेको छ, जुन् उनको निजत्व हो, र काव्यसौन्दर्य पनि हो । गाउँ उनको सम्झनाको उज्यालो हो, र कालो वर्तमानमा उनलाई बाचाइरहने धिपधिपे बत्ती पनि हो । सहरमा बस्छन्, तर सहरको विश्वास छैन, भर छैन । समाजको तल्लो तप्का, गरिब र सर्वहाराका हिमायती हुन् । परिवर्तनका पक्षपाती हुन् ।
केही सीमा, केही प्रश्न । पश्चिमेली आधुनिकतावादी कवि, विशेष गरी टी.एस. इलियटको प्रभाव देखिन्छ । पश्चिमको आधुनिकतावादी कविताको एउटा प्रवृत्ति के थियो भने, त्योे सहरको चित्रणमा बढी केन्द्रित थियो, र त्यसको अँध्यारोको बारेमा बढी संवेनशील थियो । निस्सारता, शङ्का, बाँझोपन, एक्लोपन आदि पात्र वा चरित्रका यथार्थ हुन्थे, र झल्याकझुलुक चेतनाको उज्यालो देख्थे । इलियटको “वेस्ट लेण्ड” पनि सबै निस्सारताको बाटो छिचोल्दै उपनिषद्को उज्यालोमा आइपुगेर सुस्ताएको छ, र ओम् शान्ति गाउँदै सकिएको छ । थेबे एउटा बुद्ध पर्खिरहेका छन्, पूर्वजन्मको आभास गरिरहेका छन् । यो अनौठो साम्य—कसरी आएको होला !
दोस्रो, सहरले थाकका थाक अँध्यारो दिएको बेला, झल्याकझुलुक उज्यालो पनि नदिएको होइन । गाउँले सधैँ उज्यालै उज्यालो कोरलेको बेला अलिअलि अँध्यारो पनि नकोरलेको होइन । यस यथार्थको बोधमा कवि थेबे अलि एकाङ्गी भएका हुन् कि? पाठकले कविताभरि उज्यालो र सकारात्मकता भेट्टाउन ठूलो कसरत गर्नुपर्ने उनले बनाएका छन् । उनको समकालका साक्षी उनका धेरै पाठकहरू पनि त छन् । तिनले सोध्लान्ः हामीले देखेको उज्यालो तिमीले नदेख्नु समयको दोष कि अलिअलि तिम्रो पनि दृष्टिको अल्पता हो, कविज्यू ?
Tags: फालेलुङ र काबेली बजारमहेश पौड्यालः